Qaar Kamid Ah Kuraasta Gobolada Wuqooyi Oo Maanta Lagu Doortay Magaalada Muqdisho
Tuesday January 25, 2022 - 21:51:00
Guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa Maanta waxaa ay Xarunta dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho 9-kamid ah kuraasta Gobolada Shacabka ee Gobolada Waqooyi.
Kursiga 1-aad ee doorashadii Maanta oo ahaa Hop#247 ayaa waxaa ku tartami lahaa Xildhibaan Khadra Maxamed Tukaale oo kursiga horay ugu fadhiday iyo Filsan Jaamac Cismaan, balse waxaa kursiga ku guuleysatay Khadra Maxamed Tukaale oo cod gacan taag ah ku heshay100 Ergo kadib markii ay tanaasushay Filsan Jaamac Cismaan, waxaana ka aamustay hal Ruux.
Kursiga Shanaad ee Hop209 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Xuseen Haadi, waxaana kursigaan horay ugu fadhiyay oo ka geeriyooday Alle ha u Naxariistee Axmed Dhimbil Rooble Casoowe.
Kursiga lixaad ee HOP211 ayaa waxaa ku guuleysatay Caasho Koos Maxamuud Cumar oo kursigaan horay ugu fadhiday Afartii sano ee la soo dhaafay.
Kursiga 7aad ee Hop201 ayaa waxaa ku guuleystay Dr Cabdullaahi Xaashi Abiib, waxaana horay ugu fadhiyay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Kursiga Sideedaad ee Hop#257 ee doorashada Maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo baxday Nadra Saalax Cabdi, waxaana horay Kursigaan ugu fadhiyay Cabdalla Xaaji Cali.